Syllable D900 Mini, falanqeyn iyo ra'yi | Androidsis
Syllable D900 Mini, waxaan dib u eegis ku sameynay headphones-ka wireless-ka ee wireless-ka ah
Alfonso ee Miraha | | Aaladaha Android, Qalabka kale, Reviews
Sameecadaha dhagaha la 'wireless' ayaa dhamaantood cadho badan. Soo-saareyaal badan ayaa soo bandhigaya xalkooda. Dhawaan Waxaan falanqeeyay LG Tone Infinim ka soo saaraha Kuuriya, hadda waa waqtigii la isku deyi lahaa dhagaha dhagaha ee ugu dambeeyay Sirta.
Waxaan ka hadlayaa kan Xarafka D900 Mini, sameecado iyo madaxbannaan dhegaha dhegaha, ha isticmaalin nooc kasta oo xiriir ah oo ka dhexeeya. Qalab xiiso leh oo si cad diirada u saaran dadka ciyaaraha. Aniga oo aan ku sii dheeraan, ayaan kula tegayaa isaga Syllable D900 Dib u eegis sameecadaha sameecadaha yar yar.
1 Syllable D900 Mini, kani waa naqshadeynta samaacadaha dhagaha ee isboortiga
2 Dhawaaq fulinaya iyadoon faan weyni jirin
4 Gabagabadii ugu dambeysay
Syllable D900 Mini, kani waa naqshadeynta samaacadaha dhagaha ee isboortiga
Kahor intaanan bilaabin falanqaynta dhagaha dhagaha, waxaan rabaa inaan muujiyo sidaa darteed xiisaha xiisaha leh ee loo yaqaan 'Syllable D900 Mini'. Xaqiiqduna waxay tahay in sanduuqa ay ku soo socdaan tilmaamaha, fiilada USB-ga yar, labo xirmo oo dhegaha lagu badalo iyo sanduuq lagu qaado oo waliba u adeegta inuu ka buuxiyo dhagaha. Shakhsiyan waan jeclahay nidaamkan sida samaacadaha dhagta ugu shubtaan intaad daabulayso.
Dhanka naqshadeynta, Dyllable D900 Mini waxay leeyihiin a jirka oo ka samaysan caag adag iyo daahan u ekaysiinaya muraayad qabow adoo siinaya dhagaha dhagaha mid muuqaal qaali ah.
Sidaad u aragtayba, koofiyadahaani waxay leeyihiin a naqshada gudaha waxayna leeyihiin xiriir aan xadhig laheyn oo udhaxeeya labada dhegaha, taas oo u oggolaanaysa dhaqdhaqaaqa guud. Iyadoo culeyskiisu yahay 5 garaam, samaacadaha dhagaha waxba kama dhibi karaan runtiina waxay tahay inay si fiican u hayaan.
Waxaan la aaday iyaga oo orod ah marna ma dareemin dareen ah inay dhici doonaan. Kaliya laakiin waa in mabda 'ahaan aysan laheyn iska caabin dareere ah sidaa darteedna ay ku dambeyn karaan dhidid dhidid.
Labada dhagood ee midig iyo bidix labaduba waxay leeyihiin badhan aad u ballaadhan oo leh astaanta astaanta ee loo isticmaalo in lagu dhaqaajiyo oo la is waafajiyo dhexdooda. Marka laga hadlayo taleefanka gacanta ee bidix, haddii aan ku riixno 5 ilbidhiqsi, isku-dubbarididda aaladda taleefankayaga ama kiniinkeennu wuu bilaabmi doonaa, oo adoo riixaya 2 ilbidhiqsi ayaanu damin doonnaa ama daminaynaa samaacadaha. Intaas waxaa sii dheer, sameecadani waxay leedahay makarafoon noo ogolaanaya inaan ka jawaabno wicitaanada.
Ugu dambayntii, adigoo riixaya mar haddii labada headphones midkood istaago ama dib u ciyaaro heesta aan dhegeysaneyno. Haddii aan wax seegay, waxay ahayd nidaam in heesta la beddelo ama in la xakameeyo mugga samaacadaha.
Dhawaaq fulinaya iyadoon faan weyni jirin
Aan u gudubno qaybta codka. Xaaladdan oo kale waa inaan dhahaa taas Dyllable D900 Mini waxay leeyihiin xuub 8-milimitir ah si loo abuuro dhawaaq dheellitiran oo ku wajahan mowjadaha hooseeya.
Iyadoo a 16 ohm impedance, Syllable D900 Mini runti sifiican ayuu udhaqmaa markaan dhageysaneyno muusikada halka basasku ugu badanyihiin, in kastoo heesaha heysta treble-ka sareeya ama halka codka uu yahay cunsuriga ugu badan, sameecadaha maqalka ayaa lumiya tayada ay siinayaan dhawaq liita.
Sababtaas awgeed waxay umuuqdeen aalad wanaagsan oo lagu tago qolka jimicsiga ama lagu ordo.. Hadaad dhageysato muusikada bakooradda halka basaska ugu badan yihiin, waxaad ku raaxeysan doontaa sameecadahaas wax badan.
Faahfaahin kale oo i niyad jabisay waa mugga tan iyo markii Syllable D900 Mini uu yara dhawaqay. Tani ma aha cod aad u hooseeya, laakiin jawi aad u buuq badan way adkaan kartaa in la dhagaysto muusikada. Si xiiso leh, waxaan ku tijaabiyay aaladda Apple-ka oo markaa ay u muuqato mid aad u sareeya.
Qeybta hoose ee samaacadaha dhagaha waxaan ka helnaa xoogaa isku xirayaasha biraha ee dahabka ku dahaadhan taasina waxay u adeegtaa inay rartaan koofiyadahaas. Tan awgeed, soo-saaruhu wuxuu ku daray kiiska gaadiidka xiisaha leh oo sidoo kale u adeegta inuu ku soo dallaco dhagaha dhageysiga iyada oo loo marayo nidaamkiisa pin.
Waxaad dhahdaa in kiiskani leeyahay beytar gudaha ah 35 Mah oo dammaanad qaadaysa inta udhaxeysa 4 iyo 5 kharashka buuxa ee sameecadaha. Dhinac waxaan ku haynaa deked yar oo USB ah oo aan ka qaadno kiiska gaadiidka.
Marka laga hadlayo madax-bannaanida dhagaha, dheh intaas Syllable D900 Mini wuxuu soconayaa labadii saacadood ee ugu dambeeyay iyo 52 saacadood oo heegan ah. Waqti yar ku qaadashada safarada dhaadheer laakiin in kabadan ku filan maalin jimicsiga ama wadada shaqada.
Intaas waxaa sii dheer, sameecadaha dhagaha ayaa leh waqti lacag qaadasho oo aad u gaaban, kaliya 30 daqiiqo, markaa sugitaanka illaa aad mar labaad u isticmaasho ugu yaraan.
Syllable D900 Mini waa sameecado sameecadeed leh qaab aad u soo jiidasho badan, marka lagu daro inaad runtii ku raaxeysaneysid inaad ku mahadcelisid 5 garaam oo miisaan ah, oo si fiican u haya dhegta.
El Nidaamka lacag-bixinta ayaa shaqeynaya oo soo jiidasho leh. Laakiin waxaa jira saddex cilladood oo sameecadaha dhagaha ah: hal dhinac, tayada codka ee heesaha halkaasoo codku ku badan yahay, taas oo si weyn hoos ugu dhacaysa marka la barbardhigo soo saarista heesaha halka bassku ku badan yahay, halkaasoo Syllable D900 Mini uu si fiican ugu dhaqmo. Dhinaca kale waxaan haynaa dhawaq aan aad u badnayn. Ugu dambeyntiina waxaan leenahay is-maamul xaddidan tan iyo markii laba saacadood ay u muuqan karaan xoogaa yar xaaladaha qaarkood.
Iyada oo lagu xisaabtamayo in dhagahaasi la iska iibsan karo Amazon Spain o Amazon mexico kaliya 39.99 euro, Waxaan u maleynayaa inay yihiin sharad aad u wanaagsan oo lagu xisaabtamo haddii aad raadineysid dhagaha dhagaha fudud, oo raaxo leh oo kuu oggolaanaya inaad shaqeyso ama ciyaaro isboorti adigoon ka walwalin fiilooyinka ama xiriirka ka dhexeeya labada dhegaha.
Xarafka D900 Mini
Naqshad gaar ah oo aad u fudud
Nidaamka lacag bixinta oo raaxo leh oo wax ku ool ah
Aad ayey ugu raaxaystaan ​​isticmaalka
Uma adkaysan karaan siigada iyo biyaha
Tayada maqalka ayaa hoos u dhacaysa marka aad isticmaaleysid treble
Madax-bannaanidu way yara xadidan tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Syllable D900 Mini, waxaan dib u eegis ku sameynay headphones-ka wireless-ka ee wireless-ka ah
Wuxuu rumeysnaa inuu qalad ku jiro 35ka mililim, oo uu si fiican u qaadi karo 4 ama 5 xamuul, maadaama aysan ahayn
Waxaan isticmaalaa S530 (eBay waxay ka socotaa 3 yuro ilaa 15) iyo anigoo ah podcast lover waxaan u arkaa iyaga kuwo aad u fiican
U hubso inaysan dhicin, maadaama naqshadiisu ay si fiican ugu habboon tahay dhegta, iyada oo aan lahayn suuf ama wax
Waxay socotaa 3 ilaa 4 saacadood, batterigiisuna waa 50 milliamps
Khasaaraha kaliya ee jira ayaa ah in uu yahay shaqsi, laakiin haye markii aan aadayo orod ama shaqo, waan jeclahay waxaana lagugula talinayaa inaad dhagaha ka tagto si aad u maqasho hadii gawaarida soo socdaan,
Adoo riixaya badhanka waxaad ka jawaabeysaa wicitaanada, iyo haddii aad dhageysaneysid muusig ama podcast, markaad riixdo joogsiga, waad daartaa
Oo dhammaantood waa 3 ama 4 euro
Haa, haddii lacag kaa hadhay, kuwa guriga ku jira waad ka iibsan kartaa 200 oo ka mid ah (waa halkaan ka qoslay)
Mugga lama xakamayn karo, laakiin marinka heesta ayaa awood u leh, tan waxaa lagu gaadhay adigoo riixaya badhanka taleefanka dhagaha laba jeer oo isku xiga, bidix ama midig. Waxaan jeclaan lahaa barnaamij xaliya dhibaatada mugga maadaama waqtiyo cayiman heestaas oo labo kuu kala jebinaysa dhawaquna aad ayuu u hooseeyaa.
Kuma xirmi karo samaacadaha dhagaheyga iyo LGg5, qalabka ma heli karo, maxaan khalad sameyn karaa?
Muxuu noqon doonaa Xaaladda WhatsApp, ugubnimada weyn ee barnaamijka ku sheekeysiga ugu isticmaalka badan
Kaaliyaha dalwaddii ah Bixby iyo Samsung Pay Mini ayaa ka muuqda websaydhka Samsung